Wararka - Su'aalaha caadiga ah ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka
Tijaabiyaha iska caabinta dahaarka ayaa ku habboon cabbiraadda qiimaha iska caabinta ee walxaha dahsoon ee kala duwan iyo iska caabbinta kuleylka ee qalabka wax lagu beddelo, matoorrada, fiilooyinka iyo qalabka korantada si loo hubiyo in qalabkan, qalabka korontada iyo khadadka ay ku shaqeeyaan xaalad caadi ah ayna ka fogaadaan shilalka sida shoogga korantada khasaare nafeed iyo mid qalab.
Dhibaatooyinka guud ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka waa sida soo socota:
1. Marka la cabirayo iska caabinta culeyska awoodda, waa maxay xiriirka ka dhexeeya soosaarka hadda-gaaban ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka iyo xogta la cabbiray, iyo sababta?
Soosaarka hadda-wareegga gaaban ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka ayaa ka tarjumi kara iska caabbinta gudaha ee isha korantada sare.
Waxyaabo badan oo tijaabada dahaarka ah ayaa ah culeys waxtar leh, sida fiilooyinka dhaadheer, matoorrada leh windings badan, transformers, iwm .Sidaa darteed, marka sheyga la cabiray uu leeyahay awood, bilowga hawsha baaritaanka, isha danab sare ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka waa inuu qaadaa capacitor iyada oo loo marayo iska caabinteeda gudaha, oo si tartiib tartiib ah ugu soo dallaca danabku wax soo saarka lagu qiimeeyo qiimaha danab sare ee tijaabiyaha iska caabinta dahaarka. Haddii qiimaha wax-qabad ee sheyga la cabbiray uu weyn yahay, ama iska caabbinta gudaha ee isha danab sare ay weyn tahay, habka lacag-bixinta ayaa qaadan doonta muddo dheer.
Dhererkeeda waxaa lagu go'aamin karaa sheyga R iyo C load (ilbiriqsiyo), ie t = R * C load.
Sidaa darteed, inta lagu jiro baaritaanka, culeyska waxqabadka wuxuu u baahan yahay in lagu soo oogo danabyada baaritaanka, xawaaraha kuleylka ee DV / DT wuxuu la mid yahay saamiga kuleylka hadda jira iyo kan xamuulka c. Taasi waa DV / dt = I / C
Sidaa darteed, inta yar ee iska caabinta gudaha ay tahay, ayaa sii weynaaneysa korantada hadda jirta, oo dhaqsaha iyo xasiloonida natiijada baaritaanka ayaa ah.
2. Muxuu yahay shaqada “g” dhamaadka qalabka? Jawiga tijaabada ee danab sare iyo caabbinta sare, maxaa qalabku ugu xiran yahay "g" terminal?
Dhamaadka "g" ee qalabku waa terminaal gaashaaman, oo loo adeegsado in lagu baabi'iyo saameynta qoyaanka iyo wasakhda bey'ada tijaabada ee natiijada cabbirka. Dhamaadka “g” ee qalabka waa in la hareer maro qulqulka qulqulka dusha sare ee shayga la tijaabiyay, si qulqulka qulqulka uusan u dhaafin wareegga tijaabada aaladda, isaga oo tirtiraya qaladka uu sababay dheecaanku hadda. Markaad tijaabineyso qiimaha iska caabinta sare, dhamaadka G waxay u baahan tahay in la isticmaalo.
Guud ahaan marka laga hadlayo, g-terminalka waa la tixgelin karaa markuu ka sarreeyo 10g. Si kastaba ha noqotee, kala duwanaanshahan iska caabinta ma ahan mid dhammaystiran. Waa nadiif waana qalalan tahay, mugga sheyga la cabirayaana waa yar yahay, sidaa darteed wuu xasilloon yahay iyada oo aan lagu qiyaasin 500g g-dhamaadka; Jawiga qoyan iyo wasakhda ah, iska caabinta hoose waxay sidoo kale u baahan tahay g terminal. Gaar ahaan, haddii la ogaado in natiijada ay adag tahay in la xasillo marka la cabbirayo iska caabin sare, g-terminal waa la tixgelin karaa. Intaa waxaa dheer, waa in la ogaadaa in gawaarida gaashaan ee G aysan ku xirneyn lakabka gaashaanka, laakiin waxay ku xiran tahay insulatorka u dhexeeya L iyo E, ama siligga siligga badan, oo aan ku xirnayn fiilooyinka kale ee imtixaanka ku jira.
3. Maxay muhiim u tahay in la cabbiro oo keliya caabbinta saafiga ah, laakiin sidoo kale saamiga nuugista iyo tusmada kala-goynta marka la cabbirayo dahaadhka?
PI waa tusmada kala-goynta, taas oo loola jeedo isbarbardhiga caabbinta kuleylka 10 daqiiqo iyo 1 daqiiqo inta lagu jiro tijaabada dahaadhka;
DAR waa saamiga nuugista dielectric, oo loola jeedo isbarbardhiga u dhexeeya iska caabbinta dahaarka hal daqiiqo iyo kan 15;
Imtixaanka kuleylka, qiimaha iska caabinta dahaarka waqti go'an si buuxda ugama tarjumi karto tayada waxqabadka dahaadhka shayga baaritaanka. Tan waxaa u sabab ah labadan arrimood ee soo socda: dhinac ka mid ah, iska caabbinta kuleylka ee isla qalabka wax-qabadka wax-qabadku wuu yar yahay marka muggu weynaado, iyo weyn yahay marka muggu yar yahay. Dhinaca kale, waxaa jira nuujin nuugis iyo geedi socodka kala-goysyada ee qalabka dahaarka marka danab sare la adeegsado. Sidaa darteed, nidaamka awood wuxuu ubaahan yahay in saamiga nuugista (r60s ilaa r15s) iyo tusmada kala qeybsanaanta (r10min ilaa r1min) waa in lagu cabiraa tijaabada dahaarka qalabka wax lagu beddelo, fiilada, mootada iyo munaasabado kale oo badan, iyo xaalada dahaadhka ayaa lagu xukumi karaa xogtan.
4. Maxay baytariyo dhowr ah oo ah tijaabiyaha iska caabinta dahaarka elektarooniga ahi u soo saari karaan danab sare oo DC ah? Tani waxay ku saleysan tahay mabda'a diinta DC. Ka dib markii kor u qaadista hawsha wareegga, danab saadka ka hooseeya loo kiciyo wax soo saar sare oo DC ah. In kastoo koronto sare oo la soo saaray ay ka sareyso, awoodda wax soo saarku way yar tahay (tamar yar iyo mid yar oo hadda jirta).
Fiiro gaar ah: xitaa haddii awooddu aad u yar tahay, laguma talinayo in la taabto baaritaanka baaritaanka, weli waxaa jiri doona xatooyo.
Xuquuqda daabacaadda © 2021 Shenzhen Meiruike Teknolojiyada Teknolojiyada Co., Ltd. Alaabada Featured, Khariidadda bogga, Mitirka Danab Dheeraad ah, Meter Cabbirka danab sare, Meter danab sare, 1000v- 40kv Meter Dijital ah, Mitirka Dijital Sare-Sare, Mitirka Danab, Dhammaan Alaabooyinka